New Logitech Litra Glow Iftiin, wehelka ugu fiican ee abuurayaasha nuxurka | waxaan ka imid mac
New Logitech Litra Glow iftiin, wehelka ugu fiican ee abuurayaasha nuxurka
Maanta waxaa jira fursado badan oo iftiin ah oo loogu talagalay qulqulka tooska ah ama marka la abuurayo waxyaabo ka mid ah nooc ka mid ah Mac hortiisa. Logitech ayaa hadda soo saartay iftiinkeeda Litra Glow. Waa qalab aad u xiiso badan oo iftiiminaya habayn kasta si loo abuuro nuxur.
Hadda shirkadda Logitech waxay horeba gacanta ugu haysay iftiin si gaar ah loogu abuuray isticmaalayaasha si toos ah uga shaqeeya YouTube, abuura nuxurka nooc kasta oo ka mid ah socodka, iwm. Litra Glow cusub waa a saaxiibka ugu fiican ee Logitech StreamCam, kamarad aan hore u aragnay dib u eegis buuxda muddo ka hor on waxaan ka imid Mac iyo inaan sii wadno isticmaalka maanta si aan u samayno #todoApple podcast.
Waxaa suurtogal ah in qaar badan oo idinka mid ah ay hore u leeyihiin nooc ka mid ah iftiinkan oo kale, laakiin cabbirka is haysta ee ay bixiso Logitech Litra Glow cusub, oo lagu daray qeexitaankeeda iftiinka wanaagsan, ka dhig, oo ay weheliso qiimaha la awoodi karo, badeecad aad u fiican. Halkan haddii aan ku dari karno saddexda B ee sida caadiga ah loo yiraahdo: "Wanaagsan, fiican oo raqiis ah". Si kastaba ha noqotee, fursadaha aan ka heli karno suuqa marka loo eego iftiinkan ayaa xoogaa qaali ah qiimaha, iyadoo la tixgelinayo Tilmaamo aad u fiican oo ay bixiso Litra Glow.
1 Naqshadeynta iyo cabbirrada kan cusub ee Logitech Litra Glow
1.0.1 Iyada oo korka kormeeraha, kordhin buuxda
1.0.2 Korjooge la'aan
1.0.3 Dhererka fiilada
2 Tayada iftiinka ee uu bixiyo nalkan cusub ee Logitech
3 Sideed isku xidhi kartaa oo aad u isticmaali lahayd iftiinkan cusub
4 Qiimaha iyo helitaanka iftiinka Litra
Naqshadeynta iyo cabbirrada kan cusub ee Logitech Litra Glow
Marka aan diirada saarno naqshadeynta iftiinka waxaan dhihi karnaa waa badeecad leh qaar balaastiig dhammaatay laakiin maaha kuwa tayadoodu liidato. Logitech waxay inta badan u isticmaashaa noocyadan alaabta caaga ah ee badan oo ka mid ah alaabadooda runtiina aad ayay u fiican yihiin marka ay timaado adkeysiga iyo tayada.
Waxaan ogaanay in nalka uu leeyahay tab xagga sare ku taal oo hagaajinaysa in si buuxda loogu taageero Mac-ga sare oo uu si fiican u qabto. Naqshadayntu runtii waa taxaddar si faahfaahsan, waxay muujinaysaa inay tahay badeecad Logitech ah sababtoo ah sida ay u fududahay in la isticmaalo iyo sababta oo ah sida ugu wanaagsan ee loo soo saaro.
Iftiinka Ma aha in ay tahay mid aad u weyn marka loo eego cabbirka, taas macnaheedu maaha in ay bixiso tayada iftiin aad u fiican., si buuxda loo habeeyey ugu hadla isticmaalaha labadaba software iyo badhamada laga helay dhabarka iftiinka laftiisa.
Naqshadu runtii waa taxaddar, waa labajibbaaran waxayna leedahay cabbiro kala duwan sida uu rabo isticmaaluhu. Tani waxay u mahadcelinaysaa qaab-dhismeedka ay bixiso qaybta hoose ee iftiinka, kaas oo ku fidsan ama u dhimaya hadba baahida dhererka oo xitaa laga sooci karaa iftiinka laftiisa. Waa kuwan cabbiradoodii:
Iyada oo korka kormeeraha, kordhin buuxda
Qoto dheer: 43,5mm
Miisaanka: 177 g
Qoto dheer: 27,5mm
Miisaan: 99 g
1,5m USB-C ilaa USB-A
Naqshadeynta qulqulka, Litra Glow waa habka ugu waxtarka badan ee lagu bixiyo nalka ugu habboon desktop kasta ama laptop kasta. Muujinaya tignoolajiyada Logitech TrueSoft iyo faafiye hal abuur leh oo aan gees lahayn, Litra Glow waxay mawduucaaga ku dabooshaa iftiin aan fiicneyn, oo u abuureysa muuqaal xirfad leh goob kasta. Hadday tahay fiidiyowyada YouTube, ku qulqulka Twitch ama si fudud xagga isgaarsiinta, Litra Glow had iyo jeer way kuu doorataa.
Tayada iftiinka ee uu bixiyo nalkan cusub ee Logitech
Si aad ugu ekaato sida ugu fiican kamarada horteeda, dabiiciga ah ee midabkeena maqaarku waa lama huraan. Logitech waxay ku leeyihiin nidaam loo yaqaan TrueSoft taas oo si gaar ah loo abuuray si loogu iftiimiyo wejigaaga si sax ah oo dhammaystiran, si ay nuxurkaagu si daacad ah kuugu metelaan. Iyada oo leh tusmaynta midabka ugu wanaagsan (CRI), TrueSoft waxay soo saartaa iftiin tayo leh oo tayo leh kamarad.
Heerkulka midabka midabku wuxuu u dhexeeyaa 2700K - 6500K (Kelvin) wax soo saarka ugu badan waa 250 lumens oo loo habeeyay socodka miiska saaran. Waxa kale oo ay leedahay tusmada samaynta midabka: 93 CRI (Cabbirka daraasadda Logitech madax-bannaan, Abriil 2021) iyo iyada Diffuser-ku waa mid gaar ah oo aan lahayn jir, sidaa darteed waxa ay gebi ahaanba caddaan uga muuqataa xagga hore.
Waxaan dhihi karnaa taas goobaha iftiinka ay bixiso Logitech this waa mid aad u fiican markaa dhib uma yeelan doonno marka la isku habeeyo iftiinka hal cod ama mid kale iyadoo ku xiran waqtiga maalinta, iftiinka dibadda iyo arrimo kale oo saameeya dhinacan oo aad u adag in lagu maareeyo baahinta ama abuurista fiidiyowyada.
Sida codka, iftiinka waa dhinac kale oo lagu xisaabtamayo marka la abuurayo nuxurka nooc kasta ah. Litra Glow-kan cusub, dhinaca iftiinka ee inteena badan ayaa gabi ahaanba la xalin doonaa.
Sideed isku xidhi kartaa oo aad u isticmaali lahayd iftiinkan cusub
Hawlgalka iftiinka cusub ee Logitech runtii waa mid fudud oo isticmaale kastaa wuu isticmaali karaa. Kiiskan dhabarka waxaan ka helnaa deked USB C ah kaas oo si buuxda ula jaan qaadaya inta badan aaladaha hadda jira. Iftiinka laftiisa, sidaan horay u soo sheegnay, wuxuu ku darayaa USB C oo dheer 1,5m fiilada USB A si aan ugu xirno meel kasta. Iftiinku kuma darto xidhiidhiyaha gidaarka, laakiin waxaan isticmaali karnaa mid kasta oo ka mid ah aaladaha mobilada ama dekada USB ee Mac-gayada.
Marka aan nalka ku xirno, waa in aan riixno badhanka xoogga dhexe ee dhabarka ku yaal ama aan si toos ah uga isticmaalno software-ka kumbuyuutarkayaga. Marka hore waxaan ku talinaynaa Si toos ah u isticmaal nalka adigoo isticmaalaya badhamada lagu daray gadaasha kan, way fududahay oo dhaqso badan tahay. Dhinacyada waxaan ka helnaa dhalaalka iyo xoogga iftiinka oo ay weheliyaan badhanka kale ee wax ka beddelaya iftiinka iftiinka laftiisa, laakiin caddaan jaale ah oo badan sida aan xiisayno. Hagaajinta dhalaalka iyo xoojinta oo ay weheliso lumen ee iftiinka LED-ka ee saxeexa laftiisa waa neecaw.
Qiimaha iyo helitaanka iftiinka Litra
Hadda Logitech Litra Glow cusub lama heli karo iib degdeg ah, boos celin ayaa loo baahan yahay si loo helo maadaama qiimihiisu hooseeya iyo tayada sifooyinka ay ka dhigeen iftiin aad loo raadsado abuurayaasha. Kiiskan Qiimaha Logitech Litra Glow cusub waa 69 euro.
Dib u eegida: Jordi Gimenez
Tirada iyo tayada iftiinka
Naqshadeynta iyo sahlanaanta isticmaalka
Tayada iftiinka ee abuurayaasha
waxqabadka qiimaha fiican
Buurtu waa ammaan laakiin xoogaa way u weyn tahay khafiifinta Mac-yada qaarkood
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Kombiyuutarada Mac » Gargaarka » New Logitech Litra Glow iftiin, wehelka ugu fiican ee abuurayaasha nuxurka
Mid kale oo hooseeya ee mashruuca Apple Car
Logitech waxay soo bandhigaysaa furayaasha POP, Mouse POP iyo Logitech Desk Mat